Windows7Manager v4.3.4 Final ~ မိုးညိုသား
Windows7Manager v4.3.4 Final
2:41 PM Windows7Manager, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
Windows7Manager ကိုသင်သုံးဘူးပါသလား...? သုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့v4.3.4 Final နောက်ဆုံးထွက်လေးမို့ အချိန်မှီတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။မသုံးဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ကတော့ (ဖတ်ပေးပါ)ခင်ဗျာ
Windows7အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်ဆောင်ထားရမဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
ဖိုင်ဆိုဒ်( 13 ) mb ထဲပဲရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးကFeatures အချို့နဲ့ System တွေနဲ့ hardware information တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကအစ ကြည့်ရှူနိုင်ခြင်း ၊မိမိတို့စက်ထဲမှာရှိတဲ့ running processes နဲ့ threads တွေရဲ့ အချက်အ လက်တွေ ကိုလည်းအသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊Windows7Manager မှာ 1-clicking လုပ်လိုက်တာနဲ့ စက်ကိုအလိုလျှောက်ပေါ့ ပါးရှင်းလင်းပေးခြင်း။( cleans system automatically )လည်းပါဝင်ခြင်းဝင်းဒိုးရဲ့အပိတ်အဖွင့် နဲ့ စတင်ခြင်းကိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ပေးခြင်း(၊windows startup and shutdown speed) ကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊ hardware တွေရဲ့ system speed နဲ့ performance တွေကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊မ လိုအပ်တဲ့ system tasks တွေကိုလည်း Turn off လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Registry Cleaner ကလည်း မိမိတို့ရဲ့ incorrectly linked registry entries အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးခြင်း နဲ့စတဲ့ Features လေးတွေတော်တော်များများကိုပါဝင်ပါတယ်။ကဲဆောင်ထားလိုက်ပါတော့ ခင်ဗျာ။.
zippyshare ; sharebeast ;Tusfiles